Mbola tsy nahazo fahafahana ireo mpikatroka Angoley, haharitra hafiriana ny nofy ratsy ? · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 04 Desambra 2019 4:01 GMT
(Lahatsoratra tamin'ny febroary 2016)
Fitsarana an'ireo mpikatroka miisa 17 nosamborina tany Angola. Sary: MakaAngola
Toa tsy misy fiafarany ny tsy fanomezana fahafahana ireo mpikatroka Angoley. Ny hijanonan'izy ireo hatrany any amin'ny toerana ambenana no fanapaha-kevitry ny fitsaram-paritany tany Luanda farany. Mbola mandeha ny fitsarana an'ireo “15 + 2″ nanomboka tamin'ny volana Novambra 2015 ary ny “15” no nigadra nanomboka tamin'ny volana Jona tamin'io taona io ihany. Haharitra hafiriana ny nofy ratsy ?
Araka ny pejy Facebook -n'ny DW ho an'i Afrika:
Nahatonga alahelo tamin'ireo fianakaviany sy ireo olom-pirenena hafa izay naniry ny hahita ireo mpikatroka niakatra fitsarana azo natrehana malalaka ny fanapahan-kevitry ny fitsarana hitazona ireo mpikatroka any amin'ny fonenana voaambina. Noho izany, raha nolavina ny fampakarana ny raharaha nataon'ny mpiaro dia mbola tsy hahazo fahafahana mandra-pahatongan'ny fitsarana manaraka ireo tanora ireo.
Hoy i Adelaide Manuel Ade tao anatin'io lahatsoratra io ihany:
Atsaharo ny adihevitra momba ity fitazonana ireo mpikatroka any amin'ny fonenana voaambina ity, omeo ny tanora ny fahafahana farany izay mendrika azy ireo sy ny zon'izy ireo hahazo onitra, izany no kely indrindra azon'izy ireo atao amin'ity tantara tsangana kely niainan'izy ireo ity.
Tsiahivina fa niampanga ireo mpikatroka Angoley miisa 15 ho nikasa hanongam-panjakana tamin'ny alàlan'ny fampiasana boky ny Governemanta.